गर्भमा छोरा छन् की छोरी भनेर हेर्न श्रीमतिको पेट हसियाले काटिदिए - Rising Dainik
गर्भमा छोरा छन् की छोरी भनेर हेर्न श्रीमतिको पेट हसियाले काटिदिए
December 15, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on गर्भमा छोरा छन् की छोरी भनेर हेर्न श्रीमतिको पेट हसियाले काटिदिए
एजेन्सी – गर्भमा छोरा छ की छोरी भनेर हेर्न एक जनाले आफ्नै श्रीमतिको पेट हसियाले काटेका छन् । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बदायूं जिल्लामा एक जनाले गर्भमा हुर्किरहेको शिशु छोरा हो वा छोरी भनेर हेर्न त्यसो गरेका हुन् ।
सो घटनामा घाइते भएकी महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने दिल्लीको एक अस्पतालमा उपचार चलिरहेको बताइएको छ । सो घटनामा संलग्न श्रीमानलाई पक्राउ गरिएको छ ।
महिला घाइते भएपछि उनका भाइले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । सोही आधारमा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
श्रीमति अनिताको पेटमा हसिया प्रहार गरेको आरोप पन्नालालमाथि लागेको छ । उनका ५ जना छोरी भएको र छैठाैँ गर्भमा छोरा छन् की छोरी भनेर हेर्न त्यसो गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारीबीच आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न निर्देशन दिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हतारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय कोरोना सं’क्रमण प्रसारका दृष्टिले घा’तक हुन सक्ने औँल्याएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि भने महामारीका वेला राज्यले भिड व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै अब विद्यालय पनि बन्द राख्न नहुने अडानमा देखिएका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी संघीय सरकारले जेसुकै निर्णय गरे पनि आफूले विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘पार्टी प्यालेस, हाटबजार, चाडबाड सबै खुला गर्ने अनि विद्यालय बन्द गरेर बस भन्न कुन हिसाबले मिल्छ ?’ नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘राज्यले अन्य क्षेत्र बन्द गर्न के गृहकार्य गर्‍यो ? विद्यार्थीको शिक्षालाई मात्रै ध्वस्त पार्न अनन्तकालसम्म बन्द राख्ने निर्णय मान्न हामी तयार छैनौंँ ।’
सबै क्षेत्र खुला गर्ने अनि विद्यालय बन्द राखेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नपाइने उनी बताउँछन् । ‘कोरोना सबैतिर छ । नगरपालिकाले पठन–पाठनविनै शिक्षकहरूका लागि करोडौँ खर्च गरिसकेको छ । तर, चैतदेखि विद्यालय खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि हालतमा विद्यालय खुलाई पठन–पाठन पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन निर्देशन दिएको छु ।’
यस्तै, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । जसरी पनि विद्यालय खुलेर पठन–पाठन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अडानमा उक्त नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि देखिएका छन् । बाहिर चर्चा भएजस्तो कोरोना सं’क्रमण ग’म्भीर अवस्थामा नरहेको उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । अनावश्यक विद्यालय बन्द राखेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्य नगर क्षेत्रका विद्यालय खोल्न निर्देशन भइसकेको बताउँछन् । ‘हामीले विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएका छौँ,’ आचार्यले भने, ‘कुनै पनि विद्यार्थीमा संक्रमण देखिँदा फेरि विद्यालय बन्द हुनेछन् ।’
गगन थापाले दिए राष्ट्रपति फाल्ने चेतावनी‘राजा त फाल्यौं, राष्ट्रपति पनि फा’ल्न सक्छौं’
मनोजलाई दिइन् मिनाले फेरि चुनौति, भनिन्, ‘तिमी अदालत गए म पनि जान्छु मेडिकल काउन्सिल’
एकाएक उल्टियो राजनीति: जसपा सरकारमा, रक्षा मन्त्रालय उपेन्द्र यादवको पोल्टामा !
June 3, 2021 Ramash Kunwar
मंगलबारका दिन हनुमानको पूजा गर्नाले हुनेछ म’नोकांक्षा पूरा
September 22, 2020 September 22, 2020 Ramash Kunwar
९ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबीच थियो प्रेम, लकडाउनले भेट्न नपाएपछि उठाए यस्तो कदम, प्रहरी समेत चकित्
May 3, 2021 Ramash Kunwar
बाकसभरी पैसा ल्याउछु भनेर बिदेशिएका धनसेर आफै फर्किए बाकसमा July 30, 2021
एउटै घरका बाबु र छोरी दुबै जना पाइ लट- दिए सबैमा यस्तो संदेश (भिडियो सहित) July 30, 2021
आफ्नै २ भतीजहरुले मनकलालाइ…. July 30, 2021
हिमानीले दिइन् पारसलाई माफी! पारससंगको तस्बिर राख्दै लेखिन् यस्तो भा’वुक स्टाटस July 29, 2021
पुरुषहरुले दैनिक १० मिनेट अनिवार्य महिलाको स्त’न हेरे आयु बढ्ने बैज्ञानिकहरुको दा’बी July 29, 2021